Topnepalnews.com | डाक्टरलाई चुनाव लाग्यो, चुनावमा कांग्रेसबिरुद्ध एमाले, माओवादी र मधेसवादी मोर्चा
Posted on: September 02, 2016 | views: 796
प्रजातन्त्र बहुमतलाई अल्पमतले राज्य गर्ने प्रणालीको नमुना बनिरहेको नेपाल चिकित्सक संघ अहिले चुनावी माहौलले तातेको छ ।
देशभर १७ हजार डाक्टर रहेपनि मात्र ५३ सय डाक्टरलाई संघको सदस्य बनाउन सकेको संघले देशभरका डाक्टरहरुको नेतृत्व गर्दै चुनाव गर्दैछ ।
नक्कली चिकित्सक प्रकरण र सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार अभियान चर्किरहेका बेला डाक्टरहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको नयाँ नेतृत्वका लागि शुक्रबारबाट मतदान शुरु हुँदा गठबन्धन रोचक देखिएको छ ।
निर्वाचन समितिका अनुसार शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर मतदान हुँदैछ । यसैगरि भदौ २१ देखि २५ गतेसम्म उपत्यकाभित्र मतदानको मिति तोकिएको छ । डाक्टरहरु व्यस्त रहने भएकाले मतदानको मिति फरक र लामो अबधिका लागि तय गरिएको समितिले जनाएको छ ।
चिकित्सक संघमा सधैंभरि नेपाली कांग्रेस निकट डाक्टरहरुले जित्दै आएकामा यसपटक वामपन्थी र मधेसवादी डाक्टरहरुले कडा चुनौति दिएका छन् ।
शुक्रबारबाट हुरु भएको निर्वाचनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी चिकित्सकहरुको साझा प्यानल मैदानमा उत्रिएको छ भने कांग्रेस समर्थित डाक्टरको एकल प्यानल छ ।
कांग्रेस प्यानलबाट अध्यक्षमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ छन् भने वामपन्थी समावेशी प्यानलबाट अध्यक्षमा डा. रमेश ढकाल खडा भएका छन् ।
काँग्रेस प्यानका उम्मेदवारहरु यसअघिको जितबाट हौसिएर यसपटक पनि जित सुनिश्चित भइरहेको बताउँछन् भने पेशागत समावेशी ९वामपन्थी मधेसवादी० प्यानलका अध्यक्ष रमेश ढकालले भने आफ्नो टिम राजनीतिक भन्दा पनि व्यावसायिक चिकित्सकहरुको समावेशी प्यानल भएकाले जित निश्चित भएको बताएका छन् ।
नेपालमा मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका चिकित्सकको संख्या १७ हजार कटेको छ । तर चिकित्सक संघमा ५ हजार ३ सयमात्र मतदाता छन् ।
चिकित्सक संघका वर्तमान अध्यक्ष अन्जनीकुमार झा लगायतका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको समर्थन मुक्तिराम प्यानललाई छ । यता स्वस्छ छविका चिकित्सकको रुपमा चिनिनुहुने डा. भगवान कोइराला, सरोज धिताल लगायतका चिकित्सकहरुको समर्थन ढकाल प्यानललाई रहेको बताइन्छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्व पछिल्लो पटक गोविन्द केसी प्रकरण र नक्कली चिकित्सक पक्राउ प्रकरणमा विवादमा तानिएको बेला त्यसको असर नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा देखिने संकेत छ ।